Xiaomi Mi 10 Series Event Highlight - PX
Mission Impossible (MI) တို့ ထုံးစံအတိုင်း ဝူဟန်ကြောင့် ပွဲအခမ်းအနားတွေ အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ကြားက Fan တွေရဲ့နှလုံးသားကို ဒီ Series နဲ့ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြန်ပြီပြောရမလားပဲ။ စျေးကနေ စတာပေါ့။ ဒီနှစ် Mi Flagship တွေရဲ့စျေးဟာ ခါတိုင်းလို ပေါပေါပဲပဲ မဟုတ်တော့တာ သေချာသွားပါပြီ။ Xiaomi အနေနဲ့ Redmi ကို P2P ရာထူးကိုလွှဲပြီး နောက် Level တစ်ခုအတွက် ခြေလှမ်းစလိုက်ပြီဆိုရမှာပဲ။
Mi 10 ရဲ့ 128/8 GB Version ဟာ CNY 3999 (မြန်မာငွေ ၈ သိန်းအထက်) က စပြီး
256/8 GB ကို CNY 4299 (၉ သိန်းဝန်းကျင်) နဲ့
256/12 GB ကို CNY 4699 (၉သိန်း ၇သောင်း)
Mi 10 Pro စျေးတွေကတော့
256/8 ကို CNY 4999 (၁၀ သိန်းကျော်)
256/12 ကို CNY 5499 (၁၁ သိန်းခွဲ)
512/12 ကိုတော့ CNY 5999 (၁၂ သိန်းခွဲ) အထိ ကျသင့်ပါလိမ့်မယ်။
ဆိုတော့ ရိုးရိုးနဲ့ Pro ဘာတွေကွာမလဲ????
*6.67″, Full HD+ ကို 800nits Auto နဲ့ Nearly 1200nits Maximum Brightness, Curved AMOLED နဲ့ လာမယ်။ Color Accuracy ရှယ်ကောင်းမယ်။ 90Hz Refresh Rate ကို 180Hz Touch Response နဲ့ ရမယ်။
*5G Network, WIFI 6, 8×8 MIMO Support ပါမယ်။ ဆိုလိုတာက Wifi ရော Data Speed ပါ ပိုကောင်းမယ်ပေါ့။
*Snapdragon 865 ကို LPDDR5RAM, UFS 3.0 Storage နဲ့လာမယ်။ Triple Cooling System ကိုမှာ Size ကြီးကြီးသုံးပေးထားတယ်။ ဆိုတော့ Performance ပိုင်းတော့ အထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်။
*Fan တွေသိပ်တောင့်တတဲ့ Stereo Speaker ကိုမှ Eapiece နဲ့မဟုတ်ပဲ အသံဘက်ညီအောင် အရွယ်အစားတူတဲ့ Speaker ၂ လုံးကို အပေါ်၊ အောက် ထည့်သုံးထားတယ်။
*Vibration Pattern အမျိုး ၁၅၀ အထိ Support ပေးမယ့် Linear Motor ပါလာမယ်။
ဒါဆို Mi 10 နဲ့ 10 Pro ကြား ကွာခြားချက်တွေကရော????
*Battery ပိုင်းမှာ Mi 10 က 4800, Pro က 4500.
*Charging ပိုင်းမှာ Mi 10 က 30W, Pro က 50W.
(30W Wireless နဲ့ 10W Reverse Charging က အတူတူပဲ)
*Camera မှာ 108MP, f/1.7 သုံးတာချင်းအတူတူ
*Mi 10 က 7P, Pro က 8P Lens.
Camera ၄ လုံးမှာ
Mi 10 က 108MP Main+ 13MP Ultra-wide+2MP Depth Sensor+2MP Macro.
Pro က 108MP Main+ 12MP 2x Tele+ 20MP Ultra-wide+ 5x Zoom.
Selfie ကတော့ 20MP အတူတူပဲ။ ဒီနေရာမှာ တိုးတက်လာမယ့် Camera Software ပိုင်းလေး နဲနဲထည့်ပြောချင်တယ်။ Photo Filter တွေမှာ နှင်းကျ၊ မိုးရွာတာတို့လို Motion Effect လေးတွေ ထည့်သုံးလို့ရတော့မယ်။ စာတွေကို Scan လုပ်တဲ့အခါမှာ လက်ရဲ့အရိပ်ကျနေတာမျိုးကို Software က Auto ဖျောက်ပေးလိမ့်မယ်။ AI Photo ပိုင်းက အရင်ထက် ပိုတိုးတက်လာမယ်။ Video ပိုင်းမှာ 8K Resolution အထိ အများဆုံး Support ပေးနိုင်မှာပါ။ (GG Sammy)
Mi Fan တွေအတွက်ဝမ်းသာစရာ သတင်းအနေနဲ့ Mi 10 Pro ဟာ DXOMark ကပေးတဲ့ Camera မှာ ၁၂၄ မှတ်၊ Audio မှာ ၇၆ မှတ် ကိုယ်စီနဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ Color အနေနဲ့ Mi 10 မှာ အနက်၊ အစိမ်းနဲ့ ပန်းဆီရောင် ၃ မျိုး ရွေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Mi 10 Pro မှာတော့ အပြာနဲ့ အဖြူ နှစ်ရောင် ရရှိနိုင်မှာပါ။ Mi 10 ကိုတော့ နက်ဖြန် Feb 14 မနက် ၁၀ နာရီကစပြီး ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ ကြားသိထားရတယ်။
ကိုယ်တွေအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ Mi 10 Series ဟာ မနှစ်က အမှားတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီး စျေးကွက်ထဲက ထိပ်တန်း Smartphone တွေကို စိန်ခေါ်နိုင်တဲ့ အနေအထားတစ်ခုကို ရောက်လာခဲ့ပြီလို့ ဆိုချင်တယ်။ ခင်များတို့အမြင်မှာရော သတ်မှတ်ထားတဲ့ စျေးတွေမှာ Mi 10 Series က ပြန်ရနိုင်တဲ့ Specificafion တွေက ထိုက်တန်မှုရှိတယ်ထင်သလားဆိုတာ Comment Section ကနေ စောင့်မျှော်နေပါ့မယ်။